Fivoizana blaogy any Madagasikara – Mpanao Forum manjary mpiblaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2008 23:31 GMT
Lahatsoratra niseho tamin'ny Rising Voices no nadika etoana.
Ny FOKO Blog Club dia fitaovam-pivoizann'ny tetikasa FOKO izay misahana ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Toy izao no fampidirana notsongaina avy tamin'ny vohikalan'ny FOKO:
FOKO was born a few days after TED Global conference: “Africa the next Chapter”, when TED Fellow Andriankoto and his fellow bloggers Mialy, Lova, and Joan decided to push further their cyber-activism by banking on their talents with the FOKO project to contribute ideas that will support Madagascar’s development.
Fotoana fohy monja taorian'ny fivoriambe TED Global : “Afrika amin'ny andiany manaraka”, rehefa nanapa-kevitra
i Andriankoto Harinjaka izay ny mpiaradia amin'ny TED [na TED Fellow izany hoe nandray anjara tamin'ny fivoriana TED] sy ireo namany mpiblaogy mpiray dia aminy dia i Mialy, sy i Lova, ary i Joan , ny hanohy lalindalina kokoa ny fivoizana izay efa nosahanin'izy ireo teto amin'ny sehatra Aterineto ka hampiaraka ireo talentan'izy tsirairay ao anivon'ny tetikasa FOKO mba hivoizana hevitra fampandrosoana an'i Madagasikara.
Matetika dia ireo Maki sy ny fahamaroan'ireo zava-boahary no misarika ny mason'ireo mpitazana rehefa miresaka momba an'i Madagasikara izao tontolo izao, fa tsy mba ny mponina ao aminy na ireo vakoka izay ananany. Ny tetikasa FOKO dia manam-paniriana ny hamerina indray ny adihevitra amin'ny vahoaka Malagasy ary hametraka azy ho fototra tsy azo idifiana anivon'ny zava-boahary tokana an-tany sady tandidomin-doza. Ny tanjon-dry zareo dia ny hifantoka amin'ny tanàna ambanivohitra iray (Kelilalina) any amin'ny faritra Atsinanan'ny nosy, amin'ny tetikasa iray izay hiarovana ireo reniala.Tetikasa maro samihafa novoizin'ny FOKO, ary isan'ireny ny Foko Blog Club nanomboka tamin'ny Aogositra tamin'ny taona lasa ary manome torolalana ireo tanora Malagasy mikasika ny fampiasana blaogy. Any amin'ny fiaraha-monina izay manome loha-laharana ireo antitra, tsy mahazatra ny olona ny manongilan-tsofina mihaino izay mba hevitr'ireo tanora, anefa mahatratra 75%-n'ny mponina ny tahan'izy ireo. Fanirian'ny FOKO ny manentana tanora Malagasy maromaro kokoa mba hizara ireo andavan'androny ary koa hampiasa ny blaogy amin'ny fanpianarana sy ny fampivelarana amin'ny sehatry ny asa. Mbola ny FOKO ihany no nampiantrano ny fifaninanana Blaogy Gasy Tsara Indrindra izay nanomboka tamin'ny volana Novambra 2007 sady mivoy fihaonan'ny mpiblaogy indray mandeha isam-bolana. Eto ianao raha te hihaona amin'izy ireo.Ny ankamaroan'ireo Malagasy mpampiasa Aterineto dia mpanao Forum isan-karazany izay anandratany ny feony amin'ny fahaleovantena sady miankina amin'ny fiaraha-monina eto amin'ny Aterineto. Ny Serasera dia Forum malaza amin'ny teny Malagasy izay any Antananarivo, renivohitry Madagasikara, ny foibeny ary ahitana tsy latsaky ny mambra miisa 400. Nahazo famatsiana ara-bola mirary avy amin'ny Rising Voices ny FOKO Blog club mba hanohizana izany fanentanana ireto Mpanao Forum izany handray anjara amin'ny adihevitra iraisam-pirenena andraisan'ireo blaogy, ireo lahapeo sy ireo lahatsary maneran-tany anjara.
Toy izao no zavatra nambarany tao anatin'ny tolotra tetik'asa izay nalefany taty amin'ny Rising Voices :
Indroa isam-bolana dia mikasa hamory ireo mpanao Forum izahay. Tena mpankafy Aterineto izy ireo saingy ny rohy no tsy ampy (lafo vidy, miadana be sady misedra ny fahatapahan'ny herin'aratra [delestazy]), tsy mpiblaogy izy ireo ary heveriny fa voafetra amin'ny adihevitra amin'ireo Forum ny Aterineto. Avy any Madagasikara ireo ankamaroan'ny Forum ka tianay hivelatra ivelan'ireo Malagasy mpanao Forum sy hizohy izao tontolo izao, izany kianja izany.
Ireto ireo tanjon'ny FOKO :
Fivoizana ny fanaovan-gajetin'ny tsirairay any Madagasikara, amin'ny fanentanana ireo mpanao Forum hanoratra blaogy.
Fampiasana ny fantsona fampahalalam-baovao ara-solosaina ho fitaovam-pampianarana hoanmpianatra.
Fivoizana ny fampiasana ireo fantsona fampahalalam-baovao ara-solosaina hoan'ireo mpianatra izay tsy afaka mampiasa Aterineto matetika.
Tamin'ny faha-26 Janoary no notanterahina teo amin'ny cyber cafe Teknet any Isoraka, Antananarivo ny fihaonana voalohany tamin'ny taona 2008 (faha-4 amin'ireo fihaonana efa nisy) izay anazavana ny blaogy tamin'ireo mpandray anjara. Zarain'i Joan Razafimaharo ao amin'ny blaogin'ny tetikasa FOKO ampiantranoan'ny Rising Voices ireo sakana tsy maintsy ihoarana ahatrarana ireo tanjona :
Ny fiheverana ny hanapariaka hevitr'izy samirery isaky ny lahatsoratra tsirairay dia mety miteraka fahatahorana mora azo an-tsaina hoan'ny sasantsany amin'izy ireo. Miezaka ireo mpiara-miasa aminay mba hampatoky azy ireo sy manondro izay fomba fampiasana blaogy isak'izay misy fihaonana.
Ireo Malagasy sasany eto an-toerana sady efa mpiblaogy “Pro” koa dia manampy amin'ny fanazavana ary ireo izay any ampitan-dranomasina koa dia mandray anjara amin'ny alalan'ny adihevitra mivantana sady manolotra hevitra avy amin'ireo traikefany.
Tsy ela akory dia nody ventiny ny rano natsakaina :
Ora iray monja dia efa nanapariaka ny lahatsoratra nosoratany ireo mpandray anjara voalohany. Tsy mbola nambaran'ny mpikambana tao amin'ny FOKO akory izay mikasika ny fanaovan-gajetin'ny tsirairay sy ireo torohevitry ny Rising Voices vita dikasoratra amin'ny teny Frantsay (ary tsy ho ela dia ho vita dika Malagasy) dia efa tsikaritra sahady ny fahazahoany izany dikan'ny hoe mampanako ny feo tokana :
Mbola vao 13 taona i FCandy anefa dia nanoratra mikasika ny andavan'andron'ny faritra onenany any Ambohimanarina.
I Sasa izay mahery miasa tokoa, dia mizara tantara amin'ny fijery miharo hatsikana mikasika ireo olona izay mihaona aminy isan'andro amin'ny lalana manasaraka ny tranony am-piasany.
I Avylavitra indray dia manapariaka sary vitsivitsy izay fiantraikan'ny rivomahery FAME izay nitarika fahasimbana maro tao an-tanana …
Fanontaniana samihafa no nipetraka : i Blanche07 manazava izay fahasarotana hahitana Aterineto, i Pakysse kosa maniry ny hianatra izay fomba fametrahana lahapeo sy lahatsary amin'ny blaogy, i Miora Stéphanie izay vao folo taona monja angamba dia mbola hiandry atsy aoriana kely. Mpiblaogy maro izay mbola miandry ao an-dalatsara ny anjarany.”
Vakiò ao amin'ny Rising Voices ireo antsipirihany rehetra ary mariho amin'ny solosainao io pejy io (na mamandriha fahana RSS) mba azahoanao mahazo fanampim-baovao any aoriana any. Vangio koa ny vohikalan-dry zareo ahafanao manaraka ireo rohy mitondra any amin'ireo blaogin'ireo mpandray anjara, fahana RSS-n'ireo mambran'ny FOKO, torohevitra madinidinika samihafa, tahirintsary, tranon-tserasera mivantana, sns …
Efa mihoatry ny 200 mahery sahady izao ireo mambran'ny FOKO facebook group ary vao tsy ela no nanapariaka lahatsoratra mikasika ny FOKO ny Blog Her .
Tsy ho ela dia hivelatra any Toamasina izay tanana faharoa lehibe indrindra any Madagasikara, ny FOKO. Ary hampitomboana ho roa isam-bolana koa ireo fihaonana, raha iray monja ankehitriny sady andraisan'ireo Namana Serasera maromaro anjara hanampy tosika. Harahintsika maso akaiky izay fivoatr'ity tetikasa tokana ity mba ahitantsika izay zava-baovao entiny.
Misaotra nandika e ! 🙂
06 Febroary 2008, 00:57
Ny an’ny hafa aza ve adika dia vao mainka ny antsika 😀 tsy misy tokony isaorana fa ianareo aza no tena manandratra avo ny sagan’i Madagasikara … maherezà dia tohizò e !
06 Febroary 2008, 19:54
Soratra miverina: The Purple Corner » FOKO Madagascar » FOKO is News
[…] Le 1er article de FOKO sur Rising Voices et sur Global Voices Online (en malgache ici) […]
09 Febroary 2008, 07:29
Soratra miverina: Global Voices amin´ny teny malagasy » Rakotomalala Lova : Manome toerana an’i Madagasikara
[…] an'i Madagasikara, sady vao namokatra koa ny sampany antsoina hoe Foko Blog Club izay fitaovam-pivoizana izany tetikasan'ny FOKO […]
05 Marsa 2008, 15:16